Amakhodi we-Pokemon Go Promo (2020) - Ungawathola Kanjani Futhi Uwasebenzise? - Ukudlala
Umkhuba wePokemon ubonakala ungapheli njengoba iPokemon Go ihlala ingenye yemidlalo edlalwa kakhulu. Kungani kungeke kube njalo? Kungumdlalo wamavukelambuso osilethele ukungathandwa kwabathelisi esikubona ngokoqobo kuma-smartphones ethu. Ngabe ufuna ukuba yinkosi ye-pokemon? Ngemuva kwalokho wena 'Uthole konke'! Kepha ngaphambi kokuthi ukwenze lokho, kufanele uhlale ulandela amakhodi ephromo!
Le ndatshana ihlanganisa ububanzi obuphelele balezi zinketho ezinokuhlengwa ezinikezwa yiPokemon Go. Uma unokudideka, noma uma ikhodi yakho ingasebenzi, mhlawumbe le ndatshana izokusiza. Lokhu ukuma kwakho konke kukho konke okuhlobene namakhodi we-Pokemon Go Promo!
Ayini amakhodi we-Pokemon Go Promo?
I-Pokemon Go inenketho yokuthenga ongathenga kuyo izinto eziningi. Ikuvumela ukuthi uthenge izithiyo, ama-pokeball, amasaka nezinye izinto. Vele, kuzofanele usebenzise imali ukuzithola noma uzizuzele umdlalo. Kodwa-ke, amakhodi ephromoshini akulethela ukukhululeka kokuthola ezinye izinto ze-premium ezingaphakathi komdlalo mahhala.
Kwesinye isikhathi, lamakhodi wokuphromotha ahlangana nezinye izinkampani ukukhuthaza insizakalo noma umkhiqizo wazo. Sibonile i-Samsung, i-Verizon, ngisho ne-Starbucks inikezela ngamaphromoshini amahle kakhulu. Lawa makhodi ephromo avame ukubanjwa, futhi akufanele uwageje.
Amanye Amakhodi Wokuphakamisa ongawathanda:
Amakhodi Wokukhuthaza we-Youtube TV - Uhlu Lokusebenza
Ungawathola Kanjani Amakhodi Wokuphromotha we-Pokemon?
Kuya ngomzamo wePokemon Go. Ungalandela amakhasi abo asemthethweni ezokuxhumana, lapho bangaveza khona izindaba ezimayelana namakhodi akhethekile ukuze uthole izinto zamahhala.
Ngenye indlela, uma ungazange usebenze ku-akhawunti yakho ye-Pokemon Go, hlola i-imeyili. Kwesinye isikhathi bathumela lamakhodi wabadlali abangasebenzi ukuze babashukumisele ekujoyineni futhi. Qiniseka ukuthi uhlola i-imeyili ene-akhawunti ye-Pokemon Go.
Kwesinye isikhathi iPokemon Go ibamba imicimbi ekhethekile noma amaphromoshini akwenza ukwazi ukuthola ikhodi yephromo. Ngenye indlela, bangakulethela izinselelo ezithile zokubamba izandla ngokukhethekile.
Uhlu lwamakhodi we-Pokemon Go Promo:
Ingxenye #: H7APT5ZTLM45GZV
Ingabe Amakhodi Wokuphromotha Anqunyelwe?
Ihlukahluka kusuka kukhodi eyodwa kuya kwenye. Amakhodi amaningi anikela ngezihlengo ezingenamkhawulo. Abanye banokulinganiselwa kwenombolo ethile yabadlali. Ngemuva kokushaya leyo cap, ikhodi iyakhubaza. Abanye bangaba nemikhawulo yesikhathi, noma abanye bangabi nayo nhlobo. Kodwa-ke, kubonakala njengokuhamba kwesikhathi. Azisebenzi futhi azisakwazi ukusetshenziswa.
Ngokuhambisanayo, ikhodi ngayinye yokwenyusa yePokemon Go ingasetshenziswa kanye ngumdlali. Awukwazi ukuwasebenzisa ngokungaguquguquki. Yize awekho amakhodi amaningi ephromo, ungasebenzisa umshini wokuhlenga ikhodi bese uzama inhlanhla yakho ngamakhodi angahleliwe. Ungahle ushaye i-jackpot. Kodwa-ke, akusona isenzo esifanelekile.
Uwasebenzisa kanjani amakhodi we-Pokemon Go Promo?
Uzibuza ukuthi uwahlenga kanjani amakhodi ephromo ku-Pokemon Go? Kunezindlela ezimbili:
Ungavakashela iwebhusayithi esemthethweni ye- I-NIANTIC
Ungasebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Pokemon Go. Noma kunjalo, le nketho ayitholakali kubasebenzisi be-iPhone.
Ukuhlenga kusuka kuwebhusayithi:
Vakashela iwebhusayithi esemthethweni bese ungena ku-ID ebhaliswe ne-Pokemon Go.
Qiniseka ukuthi usekhasini lokuhlenga.
Thayipha ikhodi noma ukopishe unamathisele kusuka kumthombo.
Chofoza ukusebenzisa, bese leyo nto izovela esikhwameni sakho.
Ukuze usebenzise kusuka kuhlelo lokusebenza:
Vula uhlelo lokusebenza bese uya ku-Map
Kusuka kumephu, ungavula imenyu enkulu
Vakashela isitolo kusuka kumenyu enkulu
Uma uskrolela phansi, uzothola isigaba sekhodi yephromo
Thayipha ikhodi bese usebenzisa
Bangasebenzisa Kanjani Abasebenzisi be-iPhone?
Ngenxa yenqubomgomo ye-Apple yokuthola ukusikwa okungu-30% kokuthengwa kwangaphakathi nohlelo kusuka kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza, i-PokemonGo ayikusekeli ukubuyiswa kwekhodi ngaphakathi kwegeyimu. Ngakho-ke, kuzofanele uvakashele iwebhusayithi esemthethweni bese ungena ngemvume usebenzisa i-ID ebhalisiwe. Ungahlenga lapho.
Qiniseka ukuthi Unesikhwama Esingenalutho!
Abantu abaningi benza iphutha lokuhlenga i-pokemon Go code ngaphandle kwesikhwama esingenalutho. Kubaluleke kakhulu ukukhipha uhlu lwezikhwama zakho ukuze uthole leyo nto futhi uyigcine. Uma ungenayo indawo yokugcina, ngeke ulondoloze into. Ngakho-ke, uzolahlekelwa yikhodi nento leyo.
Yini Ongayilindela Kumakhodi Wokuphromotha?
Asikho isitatimende esisemthethweni esivela konjiniyela, kepha ungalindela uhlu olubanzi lwezinto. Abasebenzisi abaningi bathole izinto, amaswidi, ama-pokeball, amabhola angavamile, ama-pokecoin, ama-avatar swags, kanye nama-stardust. Ezinye izimangalo zithi ungathola izandla zakho ezintweni ezingavamile kakhulu noma izinganekwane. Kodwa-ke, lokho kuzwakala mbumbulu ngoba umdlalo ungabeka engcupheni yokulahlekelwa yisikhalazo sawo.
Amakhodi Asebenzayo we-Pokemon Go Go:
Okwamanje, ungathola iVerizon Jacket nemaski ngokusebenzisa ikhodi yephromo LRQEV2VZ59UDA.Kodwa-ke, ungagcina amehlo akho engaphandle ukuze uthole izinketho eziningi ezingasetshenziswa ngokuzayo. Njengoba kushiwo ngaphambili, kungcono ukugcina ithrekhi yemidiya yabo yezokuxhumana, imicimbi, kanye nokukhushulwa.
Ingabe Kusemthethweni Ukusetshenziswa Kwamakhodi Wekhuphoni?
Hhayi-ke, awukwazi ukuwabiza ncamashi ngamakhodi amakhuphoni njengoba edijithali. Igama elihle kungaba amakhodi ahlengekayo. Yebo, kusemthethweni ukuzisebenzisa inqobo nje uma uzisebenzisa kusuka emithonjeni eyiqiniso. Sicela ungavumeli izimangalo zabanye abasebenzisi ku-intanethi noma usebenzise amakhodi abo. Kukhona abaduni abaningi. Abanye abakhohlisi basebenzisa lamakhodi ukuthola ezinye izinto futhi bakukhombe ukuze uthole lezi zinzuzo.
Ngakho-ke, inqobo nje uma usebenzisa amakhodi ahlinzekwe yinkampani kusuka kungxenyekazi esemthethweni, ulungele ukuhamba. Kodwa-ke, ezinye izifunda zinamathuba ahlukahlukene okuthola into ngalawa makhodi. Ngakho-ke ungasebenzisa i-VPN ukuxhuma esifundeni esihlukile. Akuphikisana ngqo nemithetho yokusebenzisa i-VPN. Kodwa-ke, sicela ungayisebenzisi kabi ukusebenzisa i-GPS spoofing nezinye izindlela ezifanayo. Ungahle uvinjelwe.
Kungaba umqondo omuhle ukulandela umkhondo wamakhodi ahlengekayo. Kodwa-ke, uma uhlangabezana nenkinga lapho zingasebenzi khona, kungenzeka zingasebenzi manje.
I-Pokemon Go iseyipulatifomu elijabulisayo elinezindlela eziningi zokuthola izinto. Amakhodi ephromo akuzona zodwa izindlela ezaziwayo; kunezindawo eziningi ezifihliwe nezindawo zokuzivocavoca ongazivakashela ukuze uthole izandla zakho kwezinye zezinto ezikhethekile kakhulu kumdlalo. Sethemba ukuthi le ndatshana isusa noma ikuphi ukungabaza maqondana nala makhodi futhi ikulethela imininingwane ebanzi!
Ngingayibuka kuphi imibukiso ye-tv yakudala online mahhala
ama-movie amasha wamahhala online mahhala
thola amakhodi we-xbox owodwa wamahhala
bukela ihhovisi mahhala ku-megavideo
Imidlalo emibili yokudlala iya phezulu ivuliwe
amasayithi wokulanda i-movie yamahhala